शहरको भिडमा बिहान र साँझको हिँडाइ बन्द गरौँ ! - नेपालबहस
शहरको भिडमा बिहान र साँझको हिँडाइ बन्द गरौँ !
| ८:४०:५२ मा प्रकाशित
५ जेठ, चितवन । लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा बिहान र साँझ हिँड्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । साँघुरा बाटामा समेत हिँड्नेहरूको सङ्ख्या बढेपछि जोखिम थपिएको हरू बताउँछन् । मानव स्वास्थ्यका लागि व्यायाम अतिआवश्यक पर्दछ ।
चिकित्सकहरूले पनि बिहान बेलुकी हिँड्न सुझाव दिने गर्दछन् । यतिबेला लकडाउनका कारण दिनभर घरमा खाएर बस्ने मात्रै गर्दा विभिन्न रोग लाग्न सक्ने जोखिम त्यतिकै छ । भरतपुर अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख डा प्रकाश खतिवडा भिडमा बाहिर नहिँड्न सुझाव दिन्छन । तीन मिटर फरकमा गुणस्तरीय मास्क लगाएर हिँड्न सकिने भए पनि त्यो सबै व्यवस्थापन शहरी क्षेत्रमा सम्भव नहुने भएकाले जोखिम नमोल्न उनको सुझाव छ ।
घरमा योग गर्न सुझाव दिँदै खतिवडाले अहिलेको अवस्थामा सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । साँघुरा सडकमा गाडी आउँदा बीचको भाग छोड्नु पर्छ । छेउबाट भिड गरी हिँड्दा उच्च जोखिमको सम्भावना रहन्छ । वरिष्ठ फिजिसियन डा कालिदास अधिकारी सामाजिक दूरी कायम गरेर तीन पत्रे ‘ट्रिपल लेयर’ सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्दा कम जोखिम भए पनि भिडमा नहिँड्नु नै उपयुक्त भएको बताउछन् ।
अहिले बजारमा त्यस्ता मास्क पाउनै मुस्किल भएको भन्दै यो जोखिमको समयमा घरमै व्यायाम गर्न उनले सुझाव दिए । पहाडी र खाली ठाउँमा हिँडडुल गर्न र सामाजिक दूरी कायम गरी खेतमा काम गर्न सकिए पनि शहरी क्षेत्रमा नहिँड्न उनको सुझाव छ ।
अहिले जिल्लाको शहरी क्षेत्रमा बिहान सबेरैदेखि र साँझ हुलका हुल मानिस हिँड्ने गरेको पाइन्छ । विगतमा भन्दा धेरैमानिस हिँड्ने गरेको देखिन्छ । मास्कविना र साधारण कपडाको मास्कमा हिँड्डुल गरेको पाइन्छ । सामाजिक दूरी कायम गर्न कठिन छ । नजिकैबाट हिँड्नेले खोक्दा, थुक्दा, हाच्छ्यु गर्दा यसको जोखिम हुने अधकारीको भनाइ छ । घरमै बस्ने र व्यायाम गरेमा सबै रोगबाट बच्न सकिने चिकित्सकको सुझाव छ ।
मन्त्री आलेद्वारा मिर्गौला तथा थाइराइड पीडितलाई आर्थिक सहयोग ९ घण्टा पहिले
यातायातको सुविधा नभएपछि याकको प्रयोग गर्न बाध्य ८ घण्टा पहिले
दुई कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि, प्रतिशेयरमूल्य कति ? २ दिन पहिले
सिंगटी हाइड्रोको आईपीओ अर्को साता नेप्सेमा सूचीकृत हुने, कति पाउला ओपनिङ्ग रेञ्ज ? २ दिन पहिले
काभ्रेमा मिर्गौला तस्करी घट्दो ४ हप्ता पहिले
बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्धकोअविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता ३ हप्ता पहिले
चीनद्वारा बिबिसी टेलिभिजनको प्रसारणमाथि प्रतिबन्ध २ महिना पहिले
सत्तारुढ पार्टीका दुवै अध्यक्ष कार्यकर्तालाई जाईलाग्न उक्साउँदै ! २ वर्ष पहिले